Dalxiisayaashu Haddeer Ma Joogi Karaan Konaklı Ski Center | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari25 Erzurum ReviewDalxiisayaasha ayaa ku sugnaan kara Konakli Ski Resort
22 / 03 / 2020 25 Erzurum Review, Gobolka Waqooyi Bari, SAWIRADA, GUUD, TURKEY, TELPHER
dalxiisayaasha ayaa hadda awoodi doona inay joogaan konakli ski dalxiis
Dawlada Hoose ee Magaalada Erzurum waxay neef cusub u soo jiiday dalxiiska magaalada. Hoteel leh naqshad aad u qurux badan oo leh 76 sariirood ayaa laga dhisay Konaklı Ski Center oo ay leedahay Dowladda Hoose ee Magaaladu. Gudaha Konaklı Hotel, oo laga dhisay dhul dabaq ah oo ah 3 kun mitir oo laba jibaaran, faafaahin kasta waxaa laga soo qaadaa hoolka shirarka oo leh qaabeyn tiyaatar ilaa makhaayadda, halka qurxinta iyo raaxada lagu wada bixinayo qolalka. Konaklı Hotel, oo 25 kiiloomitir u jirta bartamaha magaalada Erzurum, waxay dadka jecel barafka siinaysaa fursad ay kula xiriiraan dabiicadda, iyo sidoo kale dukaan qalabka lagu ciyaaro oo si gaar ah loogu talagalay dadka xiisaynaya barafka.
MADAXWEYNAHA MADAXWEYNAHA: "FARMAAN WUXUU KU SAMEEYSAA SIXIRKA"
Isagoo qiimeyn ka sameynaya mowduuca, Duqa Magaalada Mehmet Sekmen wuxuu tilmaamay in hoyga uu yahay qodobka ugu horeeya ee tayada ku soo kordhiya waaxda dalxiiska wuxuuna yiri, “Waxaan sii wadnay inaan maalgashi ku sameyno Erzurum ilaa maalintii aan xafiiska la wareegey. Dareenkan, waxaan dhammeynay dhismaha hoteelka Konaklı waxaanan u diyaarinay adeeg. Nasiib wacan magaaladeena iyo nolosha dalxiiska ee dalkeenna. ” Duqa magaalada Sekmen wuxuu kaloo warbixin ka siiyay hoteelka laga dhisay laguna dhameystirey Konaklı Ski Center. Isagoo ogaysiinaaya in Hoteelka Konaklı uu leeyahay 36 qol iyo 76 sariirood, Duqa Magaalada Sekmen wuxuu yidhi, “Hoteelkeenu wuxuu leeyahay qol lagu kulmo oo leh 100 qof oo leh naqshad tiyaatar ah. Hoteelkeena waxaa loo qaabeeyey qaab shirar iyo shirar loogu qaban karo hadii loo baahdo. ”
DIIWAANGALINTA MUHIIMADA EE FARSAMADA FARSAMADA
Qol kasta oo Konaklı Hotel, oo loogu talagalay khadad aad u qurux badan, ayaa soo jiidasho leh raaxo leh. Qolalka waxay leeyihiin wax walba oo laga heli karo qol hoteel shan-xiddig leh, oo ay ku jiraan set soo dhaweyn, nidaamka kuleyl qaboojiye, qolka qubeyska, telefishanka, taleefanka, miiska, amniga iyo labbiska. Huteelka ayaa leh goob furan oo dhan 6 kun oo mitir oo laba jibbaaran isla markaana meel gaar ah loogu talagalay martida doonaya inay kiraystaan ​​qalabka barafka. Sidan, jaceylka ciidaha ayaa labadoodaba la xiriiri doona dabeecada isla markaana ku raaxeysan doona barafyada barafka ee gaarka ah ee Konaklı Ski Center. Maalgashigaan quruxda badan, Xarunta Konaklı Ski Center ee ku taal jidka weyn ee Erzurum-Bingöl waxay noqon doontaa xiddig dhalaalaya sida Palandöken Ski Center.
Dadka deegaanka Gaziantep ayaa hadda jooga Xarunta Ski-ga ee Erik Skiing
Xarunta Xannaanadu waxay ku jirtaa dhirta
Dağcılar ayaa bilowday xero ay ku taallo Xarunta Xiriirka Soomaliyeed ee Konaklı
Meelaha kale ee lagu ciyaaro ee Konakli
Habka Badbaadinta Habsami u socodka ah ee Konakli
Vali Altiparmak ayaa ka baxsaday barxada Konakli